$82.80 $92.00 Manavotra 10% ($9.20)
Ity Blue Tie Dye Maxi Dress ity dia fitafiana mahagaga ho an'ireo vehivavy kanto izay tia karazan-javatra maro amin'ny fiainany andavanandro. Ity akanjo ity dia mifanentana tsara ho an'ireo vehivavy maniry hahazo ny lanja tsara indrindra ho an'ny volany ary koa ny mijery ny tena tsara indrindra.
Ny Blue Tie sy ny Dye Maxi Dress dia vita amin'ny lamba kofehy sy lamba vita amin'ny lamba ary ny lamba dia malefaka, malefaka ary tsy misy elatra, ka mahatonga azy ho tena mampifaly sy mampitony amin'ny karazana hafanana sy mangatsiaka. Izy io dia misy famolavolana boribory ary vita amin'ny style antsasa-manila, ka mahatonga azy ho tsara ny mivezivezy ao. Misy amin'ny haben'ny Large sy X-Large izay ahafahana mampitombo azy ireo ho an'ny vehivavy manana endrika sy endrika ary mifandray amin'ny tady manga sy fotsy ary ny loko.
habe: L, XL
Large:Length: 123 cm, Bust: 152c m, Mandrindrana: 7cm, Fehikibo: 150cm Cuff: 40cm
XL: Lange 128 cm, Birao: 156 m, Arovana: 7cm Fandefasana: 154cm manify: 42cm
80s Fashion Pink sy Blue Pastel Maxi Dress $79.00